October 2021 – Shwe Yaung Lan
[ May 19, 2022 ] ရာသီစာဒညင်းသီးချက်နည်း ကြော်နည်း ပြုတ်နည်း သုပ်နည်းအစုံစုစည်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်	News
[ May 19, 2022 ] လမ်းမှာတွေ့သမျှတိုင်းကို လက်ရာမြောက်လွန်းတဲ့ ပန်ချီကားအဖြစ်ပြောင်းလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး	Uncategorized
[ May 19, 2022 ] ဆေးလိပ်သောက်လို့ ပျက်စီးနေတဲ့ အဆုတ်ကို ၇ ရက်အတွင်း သန့်စင်နည်း	News
[ May 19, 2022 ] ကမ္ဘာပေါ်က ၅% သောလူဉ်ီးရေသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရှားပါးခန္တာက်ိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ-(၁၈) ပုံ	Uncategorized
[ May 19, 2022 ] အခုအချိန်အထိ ရိုးရိုးအိမ်သာကို သုံးနေတုန်းပဲဆိုရင် သတိထားပါတော့နော်	News
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ
October 31, 2021 SYL 0
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ…. ခြေညှိုးက ခြေမ ထက် ရှည်နေ တဲ့ သူဟာ … အ ချစ်ကြီးတယ် အစွဲ အလမ်းကြီး ခံစားလွယ် တယ် ။ အငြိုးကြီး တယ် ရန်ငြိုးထား တတ် တယ် ။ လူချစ် လူခင်ပေါ သလို မနာလို သူလည်း ပေါများ တယ် ။ ရည်ရွယ် ချက်ကြီးတယ် […]
လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အိမ်မြှောင်ချေး အကြောင်း
အိမ်မြှောင် ချေးတစ်ခုမှာဆိုရင် ထိပ်မှာကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ အဖြူရောင်အစေ့လေးကို သိသိသာသာ မြင်ကြရမှာပါ။ အိမ်မြှောင် ချေးတုံးလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရင် အောက်ဘက်မည်းနေတဲ့၊ အပိုင်းက မစင်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်က အဖြူရောင် အစေ့လေးက ဆီးဖြစ်ပါတယ်။ လူအပါအဝင် တော်တော်များများသတ္တဝါတွေမှာ ဆီးကို၊ အရည်အဖြစ်နဲ့သွားပေမယ့် အိမ်မြောင်တွေကတော့ အခဲပုံစံနဲ့သွားကြပါတယ်။ အဲ့သည်အဖြူရောင်လေးဟာ သူတို့ရဲ့ဆီးကထွက်တဲ့ ယူရစ်အက်ဆစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Crystal လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြွေတွေရဲ့ချေး ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကလည်း အိမ်မြှောင်တွေနဲ့ဆင်တူ ပါတယ်။ အိမ်မြှောင်ရဲ့ ချေးက အန္တရာယ်ရှိလားဆိုရင်အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဆာမိုနဲလားလို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ အလွန်များပြားစွာပါဝင်နေလေ့ […]
ဝက်သားစားနိုင်ပြီလား မိတ်ဆွေ ( ၁ မိနစ်အချိန်ပေးဖတ်ပါ )
ဝက်သားစားနိုင်ပြီလား မိတ်ဆွေ ( ၁ မိနစ်အချိန်ပေးဖတ်ပါ မဖတ်လိုက်ရလျှင်နောင်တရလိမ့်မည်) ရှေးရှေးတုန်းကရွာတရွာမှာ အလွန်ချစ်ခင်ကြသော ကျော်နိုင်နှင့် မောင်မြင့်ဆိုသော ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိလေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးလုံးသည် တနေ့လုပ်မှတနေ့စားရသော အခြေခံ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများဖြစ်သဖြင့် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြင့် ဘဝကိုဖြတ်သန်းလာကြရလေသည်။ အလုပ်ဆိုလျှင်လဲ ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြရသူများဖြစ်လေသည်။ တခါတလေ အလုပ်ကလေးအဆင်ပြေလို့ ငွေလေးမဆိုသလောက်ရွှင်တဲ့အခါရှိသလို တခါတလေလဲအလုပ်မရှိ၍ ထမင်းပင်နပ်မမှန်ချေ။ ဆောင်းရာသီအစတခုတွင် သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးတခုတွင်၊ လက်သမားအလုပ်ရလိုက်၍ ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးနဲ့ စိုစိုပြေပြေလေးဖြစ်လာလေသည်။ တနေ့သောအခါ၌ […]
ဇက်ကြောတက်ပျောက်ဆေး ရှောက်သီးအစွမ်း…. ဇတ်ကြောတက်ပျောက် ဆေးနည်း။ ရှောက်သီးတလုံးကို အရည်ညှစ်ယူပါ။ ပြီးနောက် အခွံ၊ အစေ့၊ အရည် သုံးမျိူးလုံးကို ဇလုံတခု ထဲထည့်ပါ၊၊ ဆား နည်းနည်းထဲ့ပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေးဖြူ ၂လီတာ ခန့် ထည့်ပြီး အအေးခံပါ၊၊ နံနက် တကြိမ် အိမ်ရာဝင်တကြိမ် အကြမ်း ပန်းကန်လုံး တလုံးပုံမှန်သောက်ပါ။ စွမ်းအင် ရက်ပိုင်းအတွင်းသိသိသာသာ ပျောက်ကင်းပါသည်။ အဝလွန်သောသူများ သောက်ပါက နောက်ကြော ဇတ်ကြော မတက်တော့ခြင်း […]
အသားအနာမခံဘဲ မျက်နှာနဲ့ နှာခေါင်းပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနည်း
အသားအနာမခံဘဲ မျက်နှာနဲ့ နှာခေါင်းပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားနည်း .. မျက်နှာနဲ့ နှာခေါင်းပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေကို အသားအနာမခံဘဲ ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ ၊ ဆားဝက်ခြံပြဿနာဟာ အလှအပကြိုက်တတ်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက်တော့ စိတ်ညစ်စရာပါ။ ချွေးပေါက်ပိတ်စေပြီး အဆီပြန်စေလို့ ဝက်ခြံတွေ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသလို သင့်ကိုလည်း ဆွဲဆောင်မှုလျော့စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆားဝက်ခြံကင်းစင်ပြီး အသားအရေကို ပိုမိုဖြူဝင်းလာစေဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးပါမယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း…. မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (Baking Soda) စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း […]
သူဌေးတွေရဲ့ပိုက်ဆံသုံးနည်း (၂မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ)
သူဌေးတွေရဲ့ပိုက်ဆံသုံးနည်း (၂မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ) တကယ့်သူဌေးတွေဟာ ငွေကိုရှာပြီး ပရမ်းပတာ သုံးစွဲနေတယ်လို့ သင်မထင်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ငွေရှာနည်းကို ကျွမ်းကျင်သလို ငွေသုံးစွဲနည်းကိုလည်း ကျွမ်းကျင်ကြတာ အသေအချာပါပဲ။ အခုဖော်ပြပေးမှာတော့ သင့်အတွက်အသုံးဝင်စေနိုင်မယ့် ချမ်းသာသူတွေရဲ့ ငွေသုံးစွဲနည်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ တကယ်မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို မဝယ်ယူမိပါစေနဲ့။ တကယ့်သူဌေးတွေဟာ လူအထင်ကြီးစေဖို့အတွက် သူတို့အတွက်တကယ် မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဝယ်ယူလေ့မရှိကြပါဘူး။ ၂။အနာဂါတ်အတွက်ငွေကြိုစုထားပါ…. ငယ်ရွယ်စဉ်မှာငွေမရှိပဲနဲ့ နေနိုင်ပေမယ့် အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာတော့ ငွေမရှိပဲနဲ့နေလို့ မရပါဘူး။ […]
SYL Amazing Photos
အခါခါ သေချာကြည့်မှသာ နားလည်မယ့်ပုံ(၁၅ ) ပုံ
October 30, 2021 K K 0
အခါခါ သေချာကြည့်မှသာ နားလည်မယ့်ပုံ(၁၅ ) ပုံ . . . . . . . . . . . . . .
အပျင်းကြီးသူတွေသာ ဉာဏ်အကောင်းဆုံးဆို သက်သေပြကြသူများ-(၂၁) ပုံ
သားအမိ သားအဖတွေမှန်း ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရကြောင်း ပုံတွေနဲ့ သက်သေပြခဲ့ကြသူများ
ချစ်သူ သုံးဦးကို တစ်ပြိုင်တည်း လက်ထပ်ယူလိုက်သူ
October 30, 2021 SYL 0
ကိုယ့်ချစ်သူ ခင်ပွန်းသည်ကို နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ မျှဝေပြီး၊ မချစ်ချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမဲ့ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံက အမျိုးသမီး၃ဦးကတော့၊ ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးတည်းကို လက်ထပ်ဖို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ သတို့သမီးသုံးယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကလည်း ငယ်ငယ်ချောချောမဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ အသက်၅၀အရွယ် အာဖရိကတိုက်သားဖြစ်ပြီး သူနဲ့အတူလက်တွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး၃ဦးအနက် ၁ဦးက၊ အသက်၄၀ကျော်ဖြစ်ပေမယ့် ၂ဦးဟာ ၂၀ကျော်အမျိုးသမီးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမျိုးသားဟာ ချစ်သူသုံးဦးစလုံးကို လက်တွဲချင်ခဲ့ပြီး ချစ်သူသုံးဦးစလုံးကလည်း သူနဲ့ပဲ ၊ ရွှေလက်တွဲဖို့လက်ခံတာကြောင့် ထိုအမျိုးသားနေထိုင်ရာ အာဖရိကတိုက်အရှေ့ပိုင်းဒေသရှိ ၊ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ […]
ရာသီစာဒညင်းသီးချက်နည်း ကြော်နည်း ပြုတ်နည်း သုပ်နည်းအစုံစုစည်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်
လမ်းမှာတွေ့သမျှတိုင်းကို လက်ရာမြောက်လွန်းတဲ့ ပန်ချီကားအဖြစ်ပြောင်းလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး
ဆေးလိပ်သောက်လို့ ပျက်စီးနေတဲ့ အဆုတ်ကို ၇ ရက်အတွင်း သန့်စင်နည်း
ကမ္ဘာပေါ်က ၅% သောလူဉ်ီးရေသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရှားပါးခန္တာက်ိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ-(၁၈) ပုံ
အခုအချိန်အထိ ရိုးရိုးအိမ်သာကို သုံးနေတုန်းပဲဆိုရင် သတိထားပါတော့နော်